Kanada ayaa hadda xidhay safarkii ay ku aadi lahayd dalalka Koonfur Afrika Omicron awgeed
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Riix halkan haddii kani yahay war-saxaafadeedkaaga! » Kanada ayaa hadda xidhay safarkii ay ku aadi lahayd dalalka Koonfur Afrika Omicron awgeed
Tan iyo bilawgii masiibada, dawladda Kanada waxay dejisay tillaabooyin soohdintayada si loo yareeyo khatarta soo dejinta iyo gudbinta COVID-19 iyo noocyada kala duwan ee Kanada ee la xidhiidha socdaalka caalamiga ah. Maanta, Wasiirka Gaadiidka, Mudane Omar Alghabra iyo Wasiirka Caafimaadka, Mudane Jean-Yves Duclos, ayaa ku dhawaaqay tallaabooyin cusub oo xuduudaha si loo ilaaliyo caafimaadka iyo badbaadada Kanada.
Tallaabo taxaddar ahaan ah, illaa Janaayo 31, 2022, Dowladda Kanada waxay fulinaysaa tillaabooyinka xuduudaha la xoojiyay ee dhammaan socdaalayaashii joogay gobolka Koonfurta Afrika - oo ay ku jiraan Koonfur Afrika, Eswatini, Lesotho, Botswana, Zimbabwe, Mozambique, iyo Namibia - gudaha 14-kii maalmood ee ugu dambeeyay ka hor intaysan imaan Kanada.
Muwaadiniinta ajnabiga ah ee u safray mid ka mid ah wadamadan 14 maalmood ee la soo dhaafay looma ogolaan doono inay soo galaan Kanada.
Muwaadiniinta Kanada, deganeyaasha rasmiga ah iyo dadka leh maqaam hoos yimaada Xeerka Hindida, iyada oo aan loo eegin xaaladdooda tallaalka ama ay hore u lahaayeen taariikh hore oo laga helay COVID-19, kuwaas oo ku sugnaa waddamadan 14-kii maalmood ee la soo dhaafay waxaa lagu qaadi doonaa baaritaan la xoojiyay. , baadhista, iyo tillaabooyinka karantiilka.
Shakhsiyaadkan waxaa looga baahan doonaa inay ku helaan, 72 saacadood gudahooda markay baxayaan, tijaabada unugyada COVID-19 ee xun ee waddan saddexaad ka hor intaanay sii wadin safarkooda Kanada. Markay Kanada yimaadaan, iyada oo aan loo eegin xaaladdooda tallaalka ama ay hore u lahaayeen taariikh hore oo ah in laga helay COVID-19, waxa lagu qaadi doonaa baadhitaan degdeg ah oo imaatinka ah. Dhammaan dadka safarka ah waxaa sidoo kale looga baahan doonaa inay dhammaystiraan imtixaanka maalinta 8 ka dib imaanshaha iyo karantiil muddo 14 maalmood ah
Dhammaan dadka safarka ah waxaa loo gudbin doonaa saraakiisha Wakaaladda Caafimaadka Dadweynaha ee Kanada (PHAC) si loo hubiyo inay haystaan ​​qorshe ku habboon karantiil. Kuwa hawada ku imaanaya waxaa looga baahan doonaa inay joogaan meel karantiil oo loo qoondeeyay inta ay sugayaan natiijada imaanshaha. Looma ogolaan doono inay sii socdaan ilaa qorshahooda karantiilka laga ogolaado oo ay helaan natiijada tijaabada imaanshaha taban.
Kuwa dhulka ku imaanaya waxaa loo ogolaan karaa inay si toos ah ugu socdaan goobta go'doominta ee ku habboon. Haddii aysan haysan qorshe ku habboon - halkaas oo aysan la yeelan doonin cid aysan la safrin - ama ayan haysan gaadiid gaar ah oo ay ku tagaan goobtooda karantiil, waxaa lagu tilmaami doonaa inay joogaan meel karantiil oo loo qoondeeyay.
Waxa jiri doona baadhis dheeraad ah oo ku saabsan qorshayaasha karantiil ee dadka safarka ah ee ka imanaya dalalkan iyo kormeer adag si loo hubiyo in socdaalayaashu u hoggaansamaan tallaabooyinka karantiil. Intaa waxaa dheer, dadka safarka ah, iyada oo aan loo eegin heerka tallaalkooda ama ay hore u lahaayeen taariikh hore oo laga helay COVID-19, kuwaas oo ka soo galay Kanada dalalkan 14-kii maalmood ee la soo dhaafay waa lala xiriiri doonaa waxaana lagu tilmaami doonaa in la baaro iyo in la karantiiliyo inta ay sugayaan. natiijada imtixaanadaas. Ma jiraan wax ka-dhaafitaanno si gaar ah loogu soo bandhigay shuruudahan cusub.
Dowladda Kanada waxay kula talisaa dadka Kanadiyaanka ah inay ka fogaadaan u safrida dalalka gobolka waxayna sii wadi doontaa la socodka xaaladda si ay ugu wargeliso falalka hadda ama mustaqbalka.
Kanada waxa ay sii waddaa in ay sii wado tijaabada molecular ka hor ee socdaalka caalamiga ah ee la tallaalay iyo kuwa aan la tallaalin ee ka imanaya waddan kasta si loo yareeyo khatarta soo dejinta COVID-19 oo ay ku jiraan noocyo kala duwanaansho ah. PHAC waxa ay sidoo kale la soconaysay xogta kiiska, iyada oo u maraysa imtixaan aan kala sooc lahayn oo khasab ah marka la soo galo Kanada.
Dowladda Kanada waxay sii wadi doontaa inay qiimeyso xaaladda soo kordhaysa oo ay hagaajiso tillaabooyinka xuduudaha sida loogu baahdo. Iyadoo saamaynta dhammaan noocyada kala duwanaanshiyaha lagu sii wado dabagalka Kanada, tallaalka, oo ay weheliso caafimaadka dadweynaha iyo tallaabooyinka shakhsi ahaaneed, ayaa ka shaqeynaya sidii loo dhimi lahaa faafitaanka COVID-19 iyo noocyadiisa.